एसएसपी सुशील यादव किन झु ण्डि ए ? प्रहरी प्रवक्ताले दिए यस्तो प्रतिक्रिया – Dainik Sangalo
एसएसपी सुशील यादव किन झु ण्डि ए ? प्रहरी प्रवक्ताले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १५, २०७८ समय: १५:१७:५७
काठमाडौं । झु न्डि ए को अवस्थामा फेला परेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी सुशील यादवको घटनामा जागिरको कुनै सम्बन्ध नरहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता बसन्तराज कुँवरले बताएका छन्। एसएसपी कुँवरले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जागिरको सम्बन्ध नदेखिएको पाइएको छ।’
सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूसँगै जागिर सुरु गरेका व्यक्ति आइजिपी हुँदा आफू भने एसएसपीमै रोकिएको कारणले यादवले आ त्म ह त्या गरेको हुन सक्नेलगायतका प्रारम्भिक अड्कलबाजीहरु भएका थिए।
यादवको बानी ब्यवहार दुई महिनादेखि परिवर्तन भएको देखिएकाले अन्य कारणहरुको सम्बन्ध रहन सक्ने र त्यसलाई सुक्ष्मरुपमा हेर्ने काम भइरहेको एसएसपी कुँवरले बताए।
यतिबेला शोकमा रहेकाले धेरै कुरा बुझ्न पनि गाह्रो हुने भन्दै उनले पारिवारिक कारण हुन सक्ने संकेत गरे । केही दिनअघि संघीय प्रहरी इकाई भैरहवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा यादब सरकारी क्वार्टरमा झु न्डि ए को अवस्थामा फेला परेका थिए।
यस्तै पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा नै साढे ११ सय प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को साउन महिनादेखि मंसिर मसान्तसम्म ११ सय ४५ प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कारबाही पर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) देखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म छन्। हेडक्वार्टरका अनुसार इन्स्पेक्टरदेखि माथि एसपीसम्म कारबाही हुनेको संख्या १९ छ। जसमा एसपी ३ जना, डीएसपी ४ जना र इन्स्पेक्टरको संख्या १२ जना छ।
त्यसैगरी, प्रहरी नायव निरीक्षक ९सई० ४६ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असई० ८६ जना, हवल्दार ३०५ जना, जवान ६७५ जना र कार्यालय सहयोगी १४ जना गरी जम्मा ११ सय ४५ प्रहरीलाई प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही गरिएको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले जानकारी दिए। प्रहरी आचरण तथा प्रहरी नियमावली विपरीत काम गरेकाले उनीहरुलाई कारबाही गरिएको हो।
नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको नीति अनुरुपमा राम्रो काम गर्ने १९ सय ८० प्रहरीलाई पुरस्कार समेत दिइएको हेडक्वार्टरले जानकारी दिएको छ। उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कार पाउनेमा १ डीआईजी, ६ एसएसपी, २१ एसपी, ७७ डीएसपी, १६४ इन्स्पेक्टर छन्।
त्यस्तै, २६४ सई, २८८ असई, ४४१ हवल्दार, ७३३ जवान र ३ कार्यालय सहयोगीलाई पुरस्कार दिइएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १६९० जनाले पुरस्कार पाएका थिए भने ९४४ जनाले सजाय पाएका थिए।
पुरस्कार पाउनेको संख्या १७।१६ प्रतिशतले बढेको छ भने सजाय हुनेको संख्या २१।२९ प्रतिशतले बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
Last Updated on: December 30th, 2021 at 3:17 pm